खुल्यो चकित हुने रहस्य ! १५ बर्षे किशोरीको पेटमा ४ महिनाको गर्भ देखिएपछि — SuchanaKendra.Com
खुल्यो चकित हुने रहस्य ! १५ बर्षे किशोरीको पेटमा ४ महिनाको गर्भ देखिएपछि
काठमाडौं। रौतहट जिल्लाको फतुवा विजयपुर–४ मा पन्ध्र वर्षीया किशोरीलाई भिटामिनको इन्जेक्सन लगाउन भनेर बोलाइ क;रणी गरेको खुलेको छ । त्यहिँ बस्ने ५२ वर्षीय टेकबहादुर चौधरीले गाउँकै किशोरीलाई क;रणी गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । घटना तीन महिना पहिलेको भए पनि पीडित चार महिनाको गर्भवती भएपछि बल्ल सार्वजनिक भएको हो ।
गरिब परिवारकी किशोरीले डरका कारण घटना लुकाउन बाध्य भएकि थिइन्। चौधरीले आफूलाई डाक्टर भन्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ । चौधरी चिकित्सक होइनन् । उनी छोराले सञ्चालन गरेको क्लिनिकमा बस्ने गर्थे । त्यही बसेपछि उनले औषधिको नाम र आफूलाई डाक्टर भन्ने गरेको प्रहरीले बताएको छ। चौधरीले पटकपटक भिटामिन सुई लगाउने भन्दै क;रणी गरेको अनुसन्धान पछि पाइयो ।
कर;णीपछि किशोरीले डरले कसैलाई भन्ने आँट गरिनन् । तर उनको पेटमा गर्भ बसेको रहेछ । समय बित्दै गएपछि गाउँलेले किशोरीको पेट ठूलो भएको देखे । यसबारे आमाले गाइँगुइँ थाहा पाएर दुई दिनअघि छोरीलाई सोधेकी थिइन् । छोरीको कुरा सुनेपछि आमा सिधै चौधरीको क्लिनिक पुगेर छोरीमाथि क;रणी गरेको भन्दै कराइन् । चौधरीले कतै नभन्नु भनेर डर देखाउँदै गर्भ झर्ने औषधि खान दिए ।
गाउँमा हल्ला चलेपछि पनि साहले चौधरी र पीडित किशोरीलाई बोलाएर सोधपुछ गरे । चौधरीले आफूमाथि पटकपटक क;रणी गरेको प्रहरी समक्ष बयान दिइन् । किशोरीकी आमाले तत्कालै प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएपछि चौधरीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको हो।